Ny NOS sy RTL dia mandinika tsara ny ala lalina mba hamonosana ny famokarany lalina: Martin Vrijland
Tato ho ato dia samy nihaino tsara ny trangan-javatra lalina lalina ny RTL sy ny NOS. Hitantsika eto ny tranga mitovitovy amin'izany amin'ny resaka «vaovao sandoka». Ny mpamokatra vaovaom-baovao vaovao lehibe sy ny mpampiasa lehibe indrindra amin'ny teknolojia lalina dia manala ny saina amin'ny tenany amin'ny filazàna fa ny fikambanana mpanao heloka bevava, ny mpampihorohoro na i Russia no tena mampiasa azy. Ary mazava ho azy fa ny DARPA (ny Agence de Projet général Fikarohana momba ny fiarovan-tena dia andrim-panjakana misahana ny fiarovana amerikana) mamolavola teknolojia izay manaiky sy mahatsapa ireo sary mihetsika tena izy, hany ka afaka miantehitra amin'ny marika kalitao hatrany ny haino aman-jery mahazatra. Makà ny sary?
Iza no manana ny vola sy ny loharano hilalao ny olona lalina? Ahoana ny naman'i John de Mol, ilay namantsika be namana, an-davitrisany? Ny fianakavian'i de Mol dia manana vola sy loharano rehetra mba hanomezana sary an-tsaina ny tenany amin'ny alàlan'i Johnny mpikomy sy i Linda mahafaly. Mandritra izany fotoana izany, John de Mol dia tompon'ny Birao Algemeen Nederlands.
Rehefa nanjary an'arivony tapitrisa voalohany tany Etazonia niaraka tamin'ny orinasan'ny solitany i John D. Rockefeller dia nampiasa mpanao horonantsary izy mba hampisehoana fa mizara vola eny an-dalana izy. Rockefeller nivadika ho mpankafy kitapo feno fankahalana ho mpankafy mpankafy tia fanta-daza. Fotoana hanokafana ny masonao ianao ary hahita ny fandehanan'ny hares sy ny tonelina mony ao ambanin'ny fototry ny fisiantsika. Tazomina ao amin'ny Trumanshow iombonana ianao amin'ny media, izay nasehoko teto tao amin'ny tranokala tamin'ny toe-javatra maro izay nametrahany fisamborana teo anoloan'ilay fakan-tsary ary nametraka korontana iray manontolo noho ny fanampiana mivantana amin'ny fampisehoana mivantana amin'ny vaovao hariva. (jereo, eto en eto). Ary tsy hamitaka antsika amin'ny lafiny rehetra ve ireo mpamokatra vaovao ireo? Nahoana araka ny eritreritrao no manana karama avo be toy izany i Jeroen Pauw sy Matthijs van Nieuwkerk sns. Satria izy ireo dia isan'ireo mpilalao 1 ny fahitanao an'izao tontolo izao. Ny vahiny talohan'ny mpikarama dia avela hofenoina amin'ny endrika resadresaka sy fitsikerana, mba hinoanao fa "tena misy zava-dratsy". Ho voafitaka ianao.
Zava-dehibe ny hanombohanao fa tsy ny haino aman-jery ihany no mamokatra vaovao sandoka, fa koa miara-miasa amin'ny teknolojia lalina. Izy ireo dia manandrana mamily ny sainao amin'ny tenanao amin'ireo olana toy ny fanararaotana na horonan-tsary mamoa sary vetaveta miaraka amin'i Dionne Stax. Izany no antony rehetra mampanahy ary izany no tanjona, satria tokony hiompana indrindra amin'ireo 'mpanao heloka bevava' ianao mba hahafahan'ny governemanta manodina ny famerenany ny asany amin'ny asa ratsy. 'Olana, fihetsika, vahaolanano antsoina hoe maxim. Avy eo ianao mamorona olana izay tokony hiahiahy ny fiaraha-monina; avy eo dia nampahatezitra ny fihetsiketsehana tamin'ny olona toa an'i Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk ary ny sisa amin'ireo mpitantana ny fahitana; hanome ny vahaolana. "Ianao ihany no afaka matoky ny sary izay avy amin'ny haino aman-jery mahazatra sy ny gazety ankatoavina," dia ny hafatra. Ny mpivarotra kodiarana dia manaparitaka ny fantsika amin'ny làlana miditra, ka mankany amin'ny mpivarotra kodiarana ianao no vahaolana.
Ny serivisy fanenjehana ho an'ny daholobe (OM) dia miahiahy momba ny mety hisian'ny fanararaotana ireo antsoina hoe horonan-tsary lalina lalina, izay amboarin'ny sary amin'ny alàlan'ny algorithma. Izany no manoratra ny NOS Asabotsy.
Ny mpampanoa lalàna, Lodewijk van Zwieten, dia nilaza tamin'ny NOS miahiahy momba ny fahatsapana ananana horonantsary lalina. “Tsy maintsy fantatsika fa raha mahita zavatra isika dia tsy hino izany intsony. Vetivety dia afaka mahita sary mora foana ianao nefa mbola tsy tena nitranga izany. ”
Vakio miaraka amin'ireo zavatra hafa ity lahatsoratra ity (in eto en eto) ny fomba lalina nisy nandritra ny taona maro sy ny fomba nanaovana ny mombamomba ny haino aman-jery amin'ny alàlan'ny ala lalina, mba hahafahan'ny governemanta manana telemarketing na mpiasa an-trano hanara-maso ny fifanakalozan-kevitra amin'ny haino aman-jery sosialy, miafina ao ambadiky ny mombamomba lalina lalina misy amin'ny tambajotra azo itokisana sy sary sy video azo itokisana. Vakiana tsara! Ary mieritrereta mafy momba ny fanohanana ilay mpanoratra manondro ny tendany hampamirapiratra izany rehetra izany. Aoka ho mpikambana na hiaraka amin'ny iray Fanomezana tokana ary zarao araka izay azo atao ny lahatsoratra. Misaotra mialoha e!
Lisitry ny rohy loharano: futurism, shownieuws.nl
Tags: deepfakes, Dionne, hosoka, Featured, john de mol, Lodewijk van Zwieten, vaovao diso, vaovao, OM, Porno, Stax
9 Septambra 2019 ao amin'ny 12: 52
Aza mianjera amin'ny fifanakalozan-kevitra ao amin'ny forum na media sosialy. Azo inoana fa miresaka amin'ny mombamomba sandoka (lalina) izay manafina masoivoho fanjakana ianao,
10 Septambra 2019 ao amin'ny 08: 30
Mino aho fa ohatra iray amin'izany ny DDS! Alohan'ny hahafantaranao azy dia ao anaty dinika mikororosy iray ianao izay manjary maimbo toy ny lafaoro labiera!
9 Septambra 2019 ao amin'ny 14: 30
ity antsy ity koa dia manapaka amin'ny lafiny roa, azo heverina koa fa miandry ny zavatra mety ho avy ny olona. Ohatra, ny sarin'ireo mpanao politika malaza, mpisehatra, sns izay ahafahan'ny olona mametraka ny marika lalina
10 Septambra 2019 ao amin'ny 08: 32
Matahotra aho fa ny politika dia amin'ny famaritana diso sandoka. Ankavia na mety!
18 Septambra 2019 ao amin'ny 15: 21
9 Septambra 2019 ao amin'ny 15: 37
Izay angatahiko amin'ny tenako dia lalina ity ... 😀
9 Septambra 2019 ao amin'ny 15: 40
9 Septambra 2019 ao amin'ny 18: 17
..ito dia tranga iray raha mijery lalina ao anaty fitaratra. Iza no mbola mijery ny nos / rtl?
10 Septambra 2019 ao amin'ny 08: 22
Tsy manana izany betsaka intsony aho (miaraka) miaraka amin'ny Flits West, fa ankoatry ny sasany aza dia nitazona azy! Ho an'ny ambiny: Sambal amin'ny Flits ?!
10 Septambra 2019 ao amin'ny 08: 28
Ny tena mahaliana ahy dia ho lasa vetivety ny famenon'ny poketra avy any Oranje miaraka amin'ny invoice indroa mikasika ny fikojakojana ny fanavaozana sy ny fanavaozana, sns, ary ny fahazoan-dàlana hiverenan'ny brochie Orange tsy ilaina! Na inona na inona lazain'i Rutte, sandoka na tsia dia gel # 1 izany any amin'ny habakabaka. Ary ny tena ratsy indrindra dia: mandeha miaraka aminy izy!
10 Septambra 2019 ao amin'ny 08: 36
Tsarovy fotsiny fa nanakombona ny bolan'i Rutte tamin'ny soavaly i Aunt Bea van Oranje. Ka, noho izany!
« Afaka mamorona ny korontana any Eropa izay hanangana ny fanjakana Ottoman ve i Boris Johnson (razamben'i Ottoman)?
Rahoviana i Etazonia no mandoa hetra amin'ny toetr'andro amin'ireto baomba ireto dia alain'izy ireo? »